Wasaaradaha Internetka - Kaniisadaha Masiixa Ku soo dhawow
Kaniisadaha Masiixa Ku Soo Dhawaada
Isuduwayaasha Iskuulka Campus - Kaniisada Sunset ee Masiixa
Maxay Qorniinku Muujiyaan?
Daraasad Bible Studies Online
JM Bible Bible wuxuu caawiyaa
Buugaag iyo Fiidiyoow
Injiilka La Wadaagay
"Isku salaama dhunkasho quduus ah. Kaniisadaha Masiixu way idin salaami doonaan."- Romans 16: 16
Ku soo dhawow boggayaga. Booqashadaada aad ayaa loo mahadcelinayaa, waxaanan ku tukanaynaa inaad rabto in aad nagu soo booqato shakhsi ahaan marka aynu caabudno Eebeha Ilaaha Qaadirka ah sida wadajir qoys.
Boggan waxaad ka baran kartaa kaniisadaha Masiixa. Waad qori kartaa koorasyada mawduucyada Baybalka, ama waxaad nala soo xiriiri kartaa wixii su'aalo ah oo aad ka qabtid Kitaabka Qudduuska ah.
Kaniisadda Masiixa waa qoys carruur ilaah ah oo lagu badbaadiyay nimcada Ilaah oo ka go'an in ay u adeegaan Rabbiga iyo ninkeena. Waxaa jira ururo badan oo kaniisadaha Christ ah oo adduunka ka yimid. Kaniisadda Rabbiga ayaa waxaad ka heli doontaa dad kasta oo da 'walba ah iyo kuwo badan oo nolosha ah oo loogu yeeray isugeyn isku mid ah jacayl iyo aqbalid. Waxaan ku rayreynaa hadiyadaha qaaliga ah ee uu Rabbigay na siiyay, waxaanu jecelnahay inaan la wadaagno hadiyadahaas iyo barakadaada. Fadlan ogow in ay jiraan meel gaar ah adiga iyo qoyskaaga kaniisadaha Masiixa.
Mawduuca Dib u Dhiska
Haddii aadan arki karin warbaahinta kor ku xusan - ka soo qaado halkan: MP4